Umbiko: Ama-CEO angama-68% awanawo ubukhona bezenhlalo | Martech Zone
Bika: Ama-CEO angama-68% awana Bukhona Bezenhlalo
NgeSonto, uDisemba 7, i-2014 NgeSonto, uDisemba 7, i-2014 Douglas Karr
Abaphathi be-Fortune 500 bathi izinkundla zokuxhumana zisiza ukwakha isithombe sale nkampani, zakha ubudlelwano nabasebenzi kanye nabezindaba futhi zinikeza ubuso benkampani. Kuyamangaza-ke ukuthi umbiko omusha ovela ku-CEO.com naku-DOMO bathole ukuthi ama-CEO angama-68% awanazo nhlobo izinkundla zokuxhumana!
Ngenkathi ngisebenza ezinkampanini zebhizinisi, inselelo enkulu esasinayo kwakuwukuxhumana nokugxila kwenkampani, izinhloso namasiko kusuka ku-CEO kuye phansi ngabaphathi kuye nakumsebenzi ngamunye. Iningi lama-CEO lalinawo izinqubomgomo zomnyango ovulekile, kepha akekho umsebenzi owaba nesibindi sokudlula ikhanda labaphathi futhi abeke engcupheni imiphumela yezombusazwe yokungena kulowo mnyango. Ngakho-ke, amanye ama-CEO angafaka isicelo se- ukuhamba ngezinyawo - Isikhathi esibekelwe ukuhamba enkampanini futhi sikhulume nabasebenzi mathupha.
Lokhu kuhlangana bekuhlala kuvula amehlo ebuholini bethu, noma kunjalo. Imizuzu embalwa ngikhuluma no ukuthi Umsebenzi uvamise ukuvula isango lokuthuthuka kwenqubo yenkampani, isiko, noma nje isimo sabo sengqondo sisonke.
Ngicabanga ukuthi empeleni kuyakhathaza ukuthi ama-CEO awazange ayise ezinkundleni zokuxhumana ngenxa yalezi zizathu. Abaphathi be-CEO bangabelana, balandele futhi baxhumane kuzo zonke izigaba zabaphathi futhi bathole isithombe esicacile sokuthi izinkampani zabo zisabela kanjani ekuqondisweni kwabo noma ebuholini. Ukukhungatheka ngeke kukwazi ukukhula futhi kukhule kungabekezeleleki uma kukhonjwe kusenesikhathi. Lokhu kungaholela ekwanelisekeni okungcono kwabasebenzi - okuhlala kuholela ekwanelisekeni kwamakhasimende okungcono.
Uma uyi-CEO engekho ezinkundleni zokuxhumana - bathole landa uMbiko we-CEO Yezenhlalakahle ka-2014 bathole izinqe zabo lapho. Bazokubonga ngakho ngokuhamba kwesikhathi… mhlawumbe ku-Twitter.
Tags: Ceoceo.comcnn imalidomoFacebookGoogle +instagramLinkedIni-ceo yomphakathisocial mediaTwitter
IDandyLoop: Abelana Nabathengi Abaku-inthanethi Phakathi Kwezitolo
Iwebhusayithi yakho akuyona iphrojekthi